ONLF oo qirtay inay wada hadalo kula jirto Ethopia Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
ONLF oo qirtay inay wada hadalo kula jirto Ethopia Madaxa Warfaafinta Jabahadda ONLF Xuseen Maxed Nuur ayaa waxa uu qiray inay wada hadalo kula jiraa dowladda Ethopia kuwaasi oo ah wada hadalo nabadeed xili Ethopia ay shaacisay inay wada hadal la furtay Jabhadaasi.
Xuseen Maxed Nuur ayaa sheegay in sharuuda hortaalla dowladda Ethopia ay tahay wada hadal kasta oo ay la furaan in shacabka dhulka Soomaalida Ethopia maamusho ay ka tashadaan aayahooda hadii aan xuriyad la siina ay sii wadayaan dagaalada.
Wada hadalada u dhaxeeya inaga iyo Ethopia waa kuwa bilow ah oo aan laga hordhici karin, waxaan hada ku balansanahay in aan ku kalano Kenya si aan usii amba qaadno wada hadaladaasi waxii kasoo baxana waanu eegeynaa ayuu yiri Madaxa Jabhadda ONLF.
Xuseen Maxed Nuur ayaa waxa uu sheegay in wada hadaladaani ay ku yimaadeen codsi ka yimid dowladda Ethopia taasi oo uu sheegay in Kenya ay ka codsadsatay in la dhexdhexaadiyo iyada Jabhadda ugu dambeyna ay aqbaleen hase ahaatee waxa uu sheegay wada hadalada aan loo mecneysan karin Jabhadda ay badashay mowqifkeeda balse ay ku taagan tahay.
Jabhadda ONLF ayaa horay garab ka mid ah waxa ay ugu biirtay dowladda Ethopia inkastoo Masuuliyiin ka tirsan Jabhadda ay arrintaasi beeniyeen, iyadoo dhawaan Wariyayaal u dhashay Sweden oo loo haystay inay xiriir la leeyihiin Jabhadaasi lasii daayay kadib markii wada hadaladaani ay bilowdeen.